Isipho esikhalise abasebenzela injinga | IOL Isolezwe
Isipho esikhalise abasebenzela injinga
Isolezwe / 1 December 2016, 3:34pm / Boniswa Mohale
UMNUZ Vivian Reddy enika abamsiza ekhaya amasheya enani lika- R10 000 entuthuko ebizwa ngeMhlanga Oceans
ZEHLE mi izinyembezi kubasebenzi ababili bakamacaphunakusale waseThekwini uMnuz Vivian Reddy ngesikhathi ebanikeza amasheya ka-R10 000 umuntu ngamunye ehhotela lomntakabani elizoba seMhlanga eliyingxenye yamahhotela akwaRadisson Blu.
Izolo uReddy obethula isigaba sesibili ohlelweni lwentuthuko ka-R3.8 billion ebizwa nge-Oceans Umhlanga, utshele izikhulu zezinkampani ukuthi kuzodayiswa amasheya ehhotela lakwaRadisson Blu eliseMhlanga elizovulwa ngoJanuwari wonyaka ozayo futhi ngeke adayiselwe abacebile kodwa kuzoqalwa ngabahlwempu njengoba amasheya ezothengwa ngisho nangumuntu ono-R1 000.
“Kuzongijabulisa ukubona umsebenzi wasezindlini nabasebenza emafemini bekhonya eRadisson Blu ngokukhulu ukuziqhenya besho ukuthi banamasheya kuyo. Njengoba sizodayisa amasheya ale ntuthuko esidlangalaleni senzela ukuthi wonke umuntu abe neqhaza elibalulekile emnothweni waseNingizimu Afrika. Sino-Rob Alexander sikhethe ukuthengela abasebenzi bethu amasheya ka-R10 000 ukuze nabo badle kahle noma sebeya empeshenini,” kusho uReddy.
Umcimbi ubuhanjelwe nayiSilo samaBandla onke esincome uReddy no-Alexander ngokudayisela umphakathi amasheya.
“Intuthuko ye-Oceans Umhlanga iyisibonelo esihle sokuthi uma osomabhizinisi bevulela abavalelwe ngaphandle emnothweni izwe lingathuthuka. Abanye osomabhizinisi bagcina ngokusho nje ukuthi kufanele kusizwe abampofu siyabonga ukuthi uVivian noRob banikeza abantu ithuba lokuthenga amasheya. Bancane kabi abantu abakwazi ukuba nezinto eMhlanga abanye baze bafe bengakaze babe nalutho eMhlanga kodwa manje abasebenzi basemafemini, abasezindlini nabanye abantu abazisebenzayo bazokwazi ukuba namasheya ehhotela elidume umhlaba wonke iRadisson Blu. Kuyintokozo ukuvula isigaba sokudayiswa kwamasheya ngokusemthethweni,” kusho iSilo.
Abasebenzi kwaReddy uNkk Baxolile Veronica Chamane (45) osesebenzele lo mndeni unyaka noNksz Nompumelelo Princess Luthuli (34) osewusebenzele iminyaka emine bebekhala baze baqhaqhazele uma bechaza ngenjabulo abayizwayo.
“Ngijabule ngendlela eyisimanga ngesipho engisinikwe nguMnuz Vivian Reddy noMama uSorisha, bafana nomndeni kimina ngoba angihlupheki bekhona. Ngesikhathi bethi asize emcimbini besingazi ukuthi basiphathele izindaba ezinhle kanjena. Ukunikezwa amasheya eRadisson Blu Hotel engigcina ngokuyibona emabhukwini kungenza ngizizwe ngibusisekile. Sengathi banganda abaqashi abafana nabakwaReddy,” kusho uNkk Chamane ehlengezela izinyembezi.
Abasebenzi bakwa-Alexander uNkk Zokwenzani Myaka (50) noNkk Delekile Katshana (51) bebekhala ngesikhathi bekhuluma neSolezwe bethi umqashi wabo akukho angabenzeli kona, ubakhele imizi, ubafundisela izingane njengoba manje esebanikeze amasheya.
“Amasheya azosisiza ukuthi sithi noma sesithatha umhlalaphansi sibe nemali noma sesithathe umhlalaphansi sizokwazi ukudla kahle ngoba uma besichazela bathi le mali iyazala unyaka nonyaka,” kusho uNkk Myaka.
Amafomu okuthenga amasheya atholakala ku-www.oceans-umhlanga.co.za naku-www.oceanhotelinvest.co.za.
Amasheya azodayiswa ngoJanuwari 23, 2017 kanti kuzodayiselwa abafake izicelo kuqala.